Akụkọ - Emeputara ohuru
Daihatsu brake wheel cylinders 47550-87304, 47560-87302, 47570-87304, 47580-87302,47510-87304, 47520-87301, 47530-87304, 47540-87301 na clutch master cylinder 31410-87322 ka emepebela n'oge Septemba, 2020. Daihatsu bu akuku ohuru ohuru maka anyi, odi nma.
Ihe dị mkpa maka mmepe ngwaahịa ọhụụ bụ mkpa ọ dị maka ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụrụ na azụmaahịa ga-adịgide. N’aka ozo, imeputa ohuru ohuru nwere ikike nke oru iguzogide na ndokwa ahia di otu a. Azụmaahịa ọ bụla nke na-amataghị mkpa mmepe ngwaahịa ọhụụ agaghị adịte aka n'ihi eziokwu ahụ bụ na azụmaahịa gbasara ihe ọhụụ na mgbanwe, na-eme ka ọ dị oke mkpa maka azụmaahịa iji gbanwee mgbanwe ndị ahụ ka ọ dịrị mkpa. Ọganihu ngwaahịa ọhụụ nwere ike ịdabere na echiche nke echiche ọhụrụ banyere usoro ọhụụ zuru oke nke ngwaahịa ugbu a na-adịghị na ahịa, ma ọ bụ enwere ike iji ya nweta nkwalite ngwaahịa nwere ike ịdị na ahịa ugbua. N'agbanyeghị ihe ọ bụla, mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ bụ akụkụ dị mkpa nke ngwa nke atụmatụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ.
Enwere ike ịhụ ihe atụ nke mkpa ọhụụ maka mmepe ngwaahịa na mpaghara mgbanwe site na akwụkwọ anụ ahụ gaa akwụkwọ ntanetị. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ ndị wuru aha ha na ụlọ ọrụ ha dum na ire akwụkwọ anụ ahụ agbakọrọ ngwa ngwa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha aghọtaghị mkpa nke mmepe ngwaahịa ọhụrụ. Companieslọ ọrụ ndị a agbasoghị mgbanwe na mpaghara ndị ọzọ nke ahịa ahụ, dị ka ihe ọhụụ na teknụzụ nke mere ka ọ dịrị ndị mmadụ mfe ibudata akwụkwọ na ngwaọrụ kama ịzụta akwụkwọ ahụ. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ nakweere mmepe ngwaahịa ọhụụ na-atụ anya mgbanwe a ma ọ bụghị naanị na ọ mere ka ndị ahịa nwee ike ibudata akwụkwọ sitere na weebụsaịtị ha, kamakwa ha na nbudata a na ndị na-agụ kọmputa nke ha, na-eme ya ngwugwu zuru oke. Nghọta a banyere mkpa ọpụpụ ngwaahịa ọhụụ emeela ka ụlọ ọrụ ndị a dị mkpa ọbụlagodi na nrụpụta ọhụụ na teknụzụ na mmasị ndị ahịa. Ihe atụ ọzọ banyere mkpa ọpụpụ ngwaahịa ọhụrụ dị na mpaghara smart phones ebe ụfọdụ ụlọ ọrụ jisiri ike ịkwado onwe ha dị ka ndị isi ahịa n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha na-ebute ụzọ na ngwaahịa ọhụrụ. Companieslọ ọrụ ndị a na-ewepụta ngwaahịa ọhụụ oge ọ bụla, na-eju anya n'ụzọ dị egwu mgbe ngwaahịa ha n'ahịa na-erute na njedebe nke usoro ndụ ngwaahịa ha. Site n'iji ndị ọhụrụ dochie ngwaahịa ndị ochie, ha na-ejigide mmasị ndị ahịa na ime ka ngwaahịa na ụlọ ọrụ ha dị mkpa.